အက်တက် ကြက်ဥပူတင်းမုန့်…( Egg Tarts ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » အက်တက် ကြက်ဥပူတင်းမုန့်…( Egg Tarts )
အက်တက် ကြက်ဥပူတင်းမုန့်…( Egg Tarts )
Posted by Ma Ei on Oct 9, 2013 in Food, Drink & Recipes | 27 comments
မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှာ ချစ်စရာလဲကောင်း၊အရသာလဲရှိတဲ့ မုန့်ကလေးကို စားခဲ့ရလို့ စိတ်ဝင်စားပြီး မီနူးကိုကြည့်လိုက်တော့ အက်တက် ကြက်ဥမုန့်ပါတဲ့…
1…မုန့်နှစ်ရည်နှင့် မုန့်သားအတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများ…
2226…1…မုန့်နှစ်ရည်နှင့် မုန့်သားအတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများ…
4… ကြက်ဥ ပူတင်းအနှစ်ရည်ကို ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။
2229…4… ကြက်ဥ ပူတင်းအနှစ်ရည်ကို ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။
5… အက်တက် ကြက်ဥပူတင်းမုန့်
2232…5… အက်တက် ကြက်ဥပူတင်းမုန့်
ကူးသွားပါပြီ မွအိရေ ကျေးကျေးပါ။ လုပ်စားကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ်။ :sar:
ဒီ ဆန်းဒေးမှာ ထပ်လုပ်မယ် စိတ်ကူးထားတယ် သဲရေ…
အရမ်း ကြိုက်တဲ့ မုန့်တွေထဲမှာပါတယ် ။
ဘာဖြစ်လို့လဲ မသိဘူး ၊
အဘ အိမ်မှာ မုန့်တွေ လျှောက်လုပ့်ကြည့်မယ် / ကလိ ကြည့်မယ် ဆိုတာ ။
မိန်းမ က သိပ်အားမပေးဘူး ၊ အလုပ်ရှုပ် ပါတယ် ၊ ဝယ်ကျွေးမယ်တဲ့ ။
အဘ စားချင်တာတွေ ကလည်း အအီ အစိမ့် ရောဂါစာတွေ ဖြစ်နေလို့လား မသိ ။
နောက်ပြီး သူ ဝယ်ကျွေး / ဝယ်လာတာ ဆိုတော့ ၂ ခု ဆို ၂ ခု ပဲ စားရတာ ။
ခပ်များများ ကို မစားစေချင်တဲ့ သဘောလား မသိ ။
အဘ ဘဝ ကလည်း သြဇီမှာတော့ ၊ တကယ့် အရုပ်ပဲ ။
ဈေးသွားတာလည်း မိန်းမပဲ သွားတယ် ။
ကိုယ် စားချင်တာ ရှိရင် သူ့ကို ကြိုပြီး ပူဆာရတယ် ။
သူက သင့် မသင့် ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ အရေအတွက် နှင့် ဝယ်ကျွေးတာ ။
အမှန်က ကိုယ့်ပိုက်ဆံ နှင့်ကိုယ် ထွက်ဝယ်စားရင်တော့လည်း ရပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဘ ကလည်း အပြင်ထွက်ရတာကို ပျင်းတော့ မထွက်ဖြစ်ဘူး ။
အဲဒီမှာ ၊ သူ့ ထားရာနေ ၊ ကျွေးတာစား ဘဝ ကို ရောက်တော့တာပဲ ။
အို ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီတစ်ခါတော့ မိန်းမ မသိအောင် ၊
ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် တိတ်တိတ်လေး လုပ်စားပြစ်မယ် ။ ပုန်ကန် ပြစ်မယ် ။
” 170ံC နဲ့ 20 မိနစ် ” ဆိုတာ ၊
ရိုးရိုး Oven နှင့် ထင်တယ် ( Microwave မဟုတ်ဘူး မှတ်လား )
အင်းးးး ။ မုန့်ခွက် ၊ ဂျုံ မှုန့် နှင့် ထောပတ် ကို မိန်းမ မသိအောင် ခိုးဝယ်ရဦးမယ် ။
ဂျုံ မှုန့် က အစိမ်းလား ။ ထောပတ် ကရော ဘာအမျိုးအစားလဲ ။
နွားနို့ က ရော နိုင်ငံခြားက UHT ဗူးနို့ဘဲလား ။
နောက်ပြီး အဲဒီထဲက ( 1 cup ) ဆိုတာတွေက ဘယ် Size တွေ တုန်း ။
1 cup ဆိုတာ မုန့်ချင်တွယ်ခွက်တွေပါအဘရေ။ မတ်ကက်တွေမှာရနိုင်ပါတယ်။ 1 cup 1/2 cup 1/3 cup 1/4 cup ဆိုဒ်စုံရှိတယ်အဘရေ။ အဘလုပ်ပြီးရင် ချစ်ချစ်ကိုကျွေးလိုက်ပေါ့ နောက်ဆို တိုတိုလုပ်တိုတိုလုပ် ချားအုံးမှာ ဆိုပီးဖြစ်တွားလိမ့်မယ်။
မိန်းမ မသိအောင် ၊ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် တိတ်တိတ်လေး လုပ်စားပြစ်မယ် ။ ပုန်ကန် ပြစ်မယ် ။
… ဆိုရင်တော့ ဒီ Comment ကို ကိုဖော အမျိုးသမီးကို ပေးပြဦးမှပါဘဲ…
… ဟုတ်ပါတယ် ရိုးရိုး Oven နဲ့ပါ…
ဂျုံ မှုန့် က အစိမ်းလား ။
… မုန့်လုပ်ဂျုံ ( ဒုံးပျံ တံဆိပ်) ပါ …
ထောပတ် ကရော ဘာအမျိုးအစားလဲ ။
… ဂီး ကိုဘဲ သုံးလိုက်တာပါ… တူတို့ဘာတို့ အကောင်းတွေသုံးလဲ ရပါတယ်…
… ရုံးနားမှာ ငွေစင်ပုလဲ က အရောင်းကားလာပါတယ်။ ရုံးကပြန်ရင် အိမ်အတွက် ၀ယ်နေကျ ဆိုတော့ မုန့်လုပ်ရင်လဲ သုံးဖြစ်ပါတယ်…
… ပုံ 1..2.. တွေ ထဲမှာပါတဲ့ ခွက်ဖြူလေးဖြစ်ပါတယ် Size စုံ အထပ်လိုက်လေးပါ…
ဒီမှာတော့ မုန့်လုပ်ချင်သူ ၀ါသနာရှင်များအတွက် City Mart မှာ အမယ်စုံဝယ်ရလွယ်ပါတယ်
၀ါသနာအရ မုန့်ကလေးတွေ လုပ်ချင်လို့ စာအုပ်ထဲ အင်တာနက်ထဲက ရှာဖွေပြီး စမ်းသပ်တာပါ…ကောင်းတာလဲရှိ..ပျက်သွားတာလဲရှိပေါ့..
ပြဿနာက စပြီ ။
” မုန့်လုပ်ဂျုံ ( ဒုံးပျံ တံဆိပ်) ပါ ”
သြဇီ မှာ လုပ်စားမှာလေ ။
မုန့်လုပ်ဂျုံ ကို ဘယ်လို ခေါ်သတုံး ။
” ရုံးနားမှာ ငွေစင်ပုလဲ က အရောင်းကားလာပါတယ် ”
အဲဒါ လည်း တဒုက္ခ ဘဲ ။
သြဇီ မှာ က UHT ဗူးနို့ ဘဲ ရှိတာလေ ။
bread flour နဲ့လုပ်ပေါ့ နုချင်ရင် cake flour နဲ့လုပ် အဘရေ။ ကျွန်မတော့ cake flour နဲ့စမ်းမို့။ နွားနို့ကတော့ အိမ်မယ် cow head ပဲရှိလို့ အဲဒါနဲ့လုပ်မို့
…plain flour, all purpose flour or flour…နဲ့ နို့ကိုလဲ
စစ်ကူ သဲ ကိုလဲ… thank…<3
အနံလေးတောင်ရလာသလိုပဲ မွအိရေ… ရမ်းရမ်းကြိုက်…
ဒီတခါဆုံဖြစ်ရင် မွအိကို လုပ်လာခဲ့ခိုင်းရန် မှတ်ထားပါသည်။
မှတ်ရတာတွေ များတော့ မေ့သွားမှာပေါ့နော်…
ကူးတွားသီ… အိမ်ရောက်မှ ခရစ်စ်လေးဂို လုပ်ခိုင်းရအုံးမယ်….
ကြောင်ချက်ကတော့ အရေးနဲ့ အရသာရှိ နေပုံပါဘဲနော်…
ကော်ဖီ ပူပူခါးခါး လေးနဲ့
မအိ ရဲ့ ကြက်ဥပူတင်း လေးနဲ့ ဆိုရင်
EGG TART ကတော့ကြိုက်လွန်းလို့ လမ်းကြုံတိုင်း ဝယ်စားဖြစ်ပါတယ်…
အချို ၂ခု၊ အဆိမ့် ၂ခုမှ ၇.၅ဟောင်ကောင်ဒေါ်လှဆိုတော့၊ ၁၀၀၀ကျပ်…
အရသာ အရှိဆုံး စားဖူးတာ မကာအိုမှာပါ…
တန်တာပေါ့..ဒီက Season မှာ တစ်ခုကို ၅၀၀ကျပ် ပေးရတာ…
လေးခုလောက်မှလဲ စားရအနေတော်ဖြစ်တာဆိုတော့… O:)
အောင်မယ်လေး ဈေးကြီးလိုက်တာ အိမ်မှာလုပ်စားတာဘယ်လောက်မှမကုန်ဘူး အိမ်မှာပဲစားတော့မယ်။ မနေ့ကလုပ်တာအဆင်ပြေတယ်မွအိရေ ကျေးကျေး။ အပြင်မှာအိုက်လောက်ဈေးရှိတာသိဘူးတော့။
အန်တီအိ.. မနေ့ကတည်းကတွေ့သီ.. အရမ်းစားချင်လို့ ဒီကနေ့သွားဝယ်စားသီ.. နည်းလေးကူးထားပေမယ့်.. လက်တည့်စမ်းဖို့တော့နည်းနည်းလက်ရှုပ်လို့ မစမ်းသေးဘူး.. :))
ပိုစ့် ထက် မုန့်ဘဲ ယူခဲ့တဲ့….
အားလုံးကို ကျွေးဖို့ စီစဉ်ပါ့မယ်…